December 2011 ~ သန့်သူရဦး ( နည်းပညာ )
သူငယ်ချင်းများခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်အရင်သုံးတဲ့ thantthuraoo@blumail.org ကိုမသုံးတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်အဲ့အကောင့်ထဲက သူငယ်ချင်းများ thantthuraoo@gmail.com ကိုအက်ပေးပါနော်။ ကွန်ပြူတာမေးခွန်းများအတွက်တော့ thantthuraoo@mmcfamily.org အကောင့်ကိုပဲဆက်သုံးပါမယ်။ မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေကိုလဲ ဇန်န၀ါရီ (၁) ရက်နေ့ကစပြန်ဖြေပေးပါတော့မယ်။ ဆိုဒ်ကိုလဲ မဖျက်တော့ပါဘူး။ ဆက်ရေးပါမယ်။
DDOS တိုက်တဲ့ Softeare ဆိုပဲ။
12:59 AM Applications, Hacker And Hacking, Hacking Tools 1 comment
မနေ့က အင်တာနက်ပေါ်လျှောက်မွှေလိုက်တာ DDOS တိုက်တဲ့ Software တစ်ခုကောက်ရလာတယ်ဗျာ။ ဘယ်လိုသုံးရလဲတော့ ကျွန်တော်လဲ မသိပါဘူး။ ကိုယ်ဟာကိုယ်သာ စမ်းကြည့်လိုက်ကြပါ။ သုံးတတ်ရင်လည်း သုံးပါ။ မသုံးတတ်ရင်လဲ မသုံးပါနဲ့။ ဘယ်လိုသုံးရသလဲဆိုတာ ကျွန်တော့်ကိုပြန်မမေးကြဖို့တော့ ကြိုပြောထားချင်ပါတယ်။ ဒီကောင်တွေကို ကျွန်တော် မသုံးတတ်သလို သုံးလဲ မသုံးပါဘူး။ ကျွန်တော်ဟာ နည်းပညာလိုက်စားသူတစ်ဦးသာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် Hacker တစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ ကြိုးစားလေ့လာရတဲ့ အကျိုးရလဒ်က အမြဲတမ်းအဖြူရောင်မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အတတ်နိုင်ဆုံး အဖြူရောင်ဖြစ်အောင်တော့ ကြိုးစားစေချင်ပါတယ်။အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ။
Download :: ifile.it
Adobe After Effect CS3 Key Gen::
7:34 PM Adobe Group, Key Generation, ကွန်ပြူတာ အမေးအဖြေများ ။ 1 comment
အောင်ကျော်ထွန်း "အစ်ကို ကျနော့်ကို adobe after effect cs3 ကီး သို့ crach လေးတင်ပေးလို့ရမလားခင်ဗျာ"
တင်ပေးလိုက်ပါပြီ ကိုအောင်ကျော်ထွန်းရေ။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။ Key Gen: ကိုအပြင်မှာ ထုတ်ပေးထားသလို .exe နဲ့လဲ လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဒေါင်းဖို့က ဒီမှာ ပါ။ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဆင်မပြေရင်ပြန်ပြောပါ။ ကျွန်တော်ထပ်တင်ပေးပါ့မယ်။
ကျွန်တော်နှင့် မြတ်စွယ်တော်ဖူး တစ်နေ့တာ အတွေ့အကြုံ။
ဒီနေ့မှပဲ ဆိုဒ်ပြင်တာပြီးတော့တယ်။ လူကို ခေါင်းတွေကို မူးနောက်နေတာပဲ။ 8.12.2011 က တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံက ပင့်လာတဲ့ ဗုဒ္ဒမြတ်စွယ်တော်က ကျွန်တော်တို့ မန်းလေးကို ရောက်လာပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ 9.12.2011 မှသွားဖူးဖြစ်တယ်။ လူက သိပ်မရှိပါဘူး။ စောသေးလို့လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ စွယ်တော်ကို နီးနီး ကပ်ကပ်ဖူးချင်တာနဲ့ အနီးဆုံးလိုင်းကို ၀င်တန်းစီလိုက်တယ်။ ပထမက တစ်တန်းကို တစ်ယောက် စီရတာပါ။ နောက်တော့ ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ မသိဘူး။ တစ်တန်းကို နှစ်ယောက်ဖြစ်သွားရော။ အဲ့အချိန်ထိ ဘာမှမဖြစ်သေးပါဘူး။ ချောင်ပါသေးတယ်။ နောက်တော့ ဘယ်တောကတက်လာတဲ့ ဟာတွေမှန်းမသိဘူးကြာကနေ ဇွတ်ဝင်တိုးတော့တာဗျာ။ တစ်တန်းကို သုံးယောက်ဖြစ်သွားရော။ အဲ့မှာ ကျွန်တော်က တိုးလို့မရတော့တဲ့အတွက် နောက်ကနေပဲ အေးအေးဆေးဆေးတန်းစီဖို့ပြောတော့ ဘယ်မှာတိုးလို့လဲ ကိုယ့်အတန်းကိုယ် စီနေတာပဲတဲ့ ကျွန်တော့်ကိုတောင် ပြန်ဟောက်လိုက်သေးသဗျာ။ ကျွန်တော်လဲ အစတော့ ဒေါဖောင်းသွားတာပေါ့။ နောက်တော့လဲ သူတို့ခမျာ ဖူးချင်လွန်းလို့ဖြစ်ရတာပဲလေလို့ ကျွန်တော်မှတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော်ပြောချင်တာ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိူးများက တိုးရဝေ့ရတာကို တော်တော်ဝါသနာကြီးပုံရတယ်။ ဘေးမှာလဲ တရုတ်ပြည်က ဘုန်းတော်ကြီးတွေနဲ့။ သူတို့တော့မသိဘူး။ ကျွန်တော်တော့ ရှက်လိုက်တာဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ အဲ့လောက်ကိုပဲ Standard မရှိကြတော့ဘူးလား။ ကျွန်တော်မေးချင်တယ်။ ဖူးရမှာပါ။ စွယ်တော်က ဘယ်မှ ထွက်မပြေးပါဘူး။ ဖြည်းဖြည်းပေါ့။ အဲ့လိုကြီးတိုးနေကြတော့လဲ ကြည့်လို့တော့မကောင်းဘူးဗျာ။ ဘုရားလူကြီးတွေက စွယ်တော်ရှေ့အရင်ရောက်တဲ့လူကို ဆုချမယ်လို့များကြေငြာထားလေသလားလို့ ထင်မိတယ်။ ဆင်ခြင်ကြည့်ကြဖို့ပါ။
အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ ဖူးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။ မိုးလဲချုပ်နေပြီမို့ အပြင်မှာ တစ်ခုခုဝင်စားချင်တာနဲ့ အရှေ့ဘက်ကျုံးကနေပတ်ပြီး တောင်ဘက်ကနေကျုံးကိုဆင်းပြီး တစ်ခုခုစားမယ်ပေါ့ စိတ်ကူးပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်။ အရှေ့ကျုံးရောက်တော့ ဆိုင်ကယ်တွေကို တန်းစီနေတာပဲဗျာ။ ကျွန်တော်လဲ မျက်စိက အငြိမ်မနေဘူး ကြည့်မိလိုက်သေးတယ်။ တွေ့လိုက်တော့ အတွဲတွေ။ အော်.....ချိန်းတွေ့နေကြတာပဲပေါ့။ ကျွန်တော်လဲ ဒီလိုပဲတွေးမိပြီး ဆိုင်ကယ်ဆက်မောင်းလာခဲ့တယ်။ တစ်နေရာရောက်တော့ တွေ့လိုက်ရတာက အတွဲတစ်တွဲ သစ်ပင်ကိုမှီပြီး စိမ်ပြေနပြေ Kissing လုပ်နေကြတာဗျာ။ ကျွန်တော့မှာ မျက်လုံးကိုပြူးသွားတာပဲ။ အရမ်းလဲ အဲ့သြမိတယ်။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးများ အဲ့လောက်ကိုပဲ အရှက်သိက္ခာမရှိကြတော့ဘူးလားဗျာ။ ကျွန်တော် အရမ်းလဲ ၀မ်းနည်းသွားမိတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေက ကျွန်တော့ကိုခေါ်ကြတယ်။ အဘိုးကြီးလေးတဲ့။ သဘောကတော့ ခေတ်မမှီဘူး၊ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲ့တော့ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ခေတ်မှီတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘယ်နေရာမှာ ခေတ်မှီနေတာလဲ။ ကျွန်တော်မေးချင်တယ်။ အခုလို လူမြင်ကွင်းမှာ အရှက်မရှိ စိမ်ပြေနပြေ Kissing လုပ်နေတာကို ခေတ်မှီတယ်လို့ဆိုရမယ်ဆိုရင် စောစောက ခေတ်မှီတယ်ဆိုတဲ့သူတွေ ဂုတ်ကနေဆွဲပြီး နပန်ကျင်းပစ်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်။ ကဲ။ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။ ကျွန်တော်ပဲ လွန်သလား။ တွေးဆကြည့်ကြဖို့ပါ။
အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ ဆိုင်ကယ်မြန်မြန်မောင်းလာခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ Unity Hotel မှာ ဘာဂါစားမယ်ဆိုပြီး ၀င်လာခဲ့တယ်။ အဲ့မှာဗျာ။ ဟိုတယ်ပေါ်ကနေဆင်းလာတာ မြန်မာအမျိုးသမီး နှစ်ယောက်။ လက်ထဲမှာ ငွေရောင်ဘူးလေး ကိုင်လို့ ကျွန်တော်ကိုက မျက်စိက အငြိမ်မနေတတ်တော့ လှမ်းကြည့်လိုက်မိတာ အရက်ပုလင်းကြီး။ ဟိုက်! လို့ဆိုပြီး ကျွန်တော်လန့်သွားမိတယ်။ ဟုတ်တယ်ဗျ။ ဟိုတယ်က ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ကို ရေခဲ ၀ယ်ခိုင်းပြီး ထိုင်သောက်နေလိုက်ကြတာဗျာ။ မြန်မာလူမျိူးများဟုတ်ပါလေစလို့ ကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ဟုတ်ပါ့ဗျာ။ မြန်မာမှ မြန်မာအစစ်။ ရေရောတဲ့ပုံကို တစ်စက်မှ မပေါက်ဘူး။ ကျွန်တော်လေ စိတ်ထဲမှာ ၀မ်းလဲနည်း။ ဒေါသလဲထွက်။ ဘယ်သူ့ကို ဒေါသထွက်လို့ ထွက်ရမှန်းလဲ မသိတာနဲ့ စိတ်တိုတိုနဲ့ စားပစ်တာ ဘာဂါ နှစ်လုံးကုန်သွားပါလေရောဗျာ.......။ :D
ကျွန်တော်နှင့် မြတ်စွယ်တော်ဖူး တစ်နေ့တာ အတွေ့အကြုံ...